XUSUUS-QORKAYGA GOOBTII CAYNABA 2; IYO BEENIN MAQAALKA (MAXAMED SIYAAD VS MAXAMED KAAHIN), EE UU QORAY AXMED NOUR GURUJE. –W/Qoray: Maxamuud Axmed Oday (Hawzar) Qormada 2aad
Thursday March 01, 2018 - 14:29:37 in Maqaallo by Editor Caynaba News
Asalkaba, marka ciidan dagaal galo, waxaa lunta kala-dambayntiisa, waxaa yaraada tiradiisa. Laakiin,
marka dib loo abaabulo, haddii uu hoggaan fiican helo, tayadiisa dagaalku way laban-laabantaa. Taas, waxaa sabab u ah, ciidanka oo aad isu barta, oo dagaal-ruug noqda, iyo ciidankoo fuluhu ka hufmo. Taasi waxay u eg-tahay, cilmiga casriga ah wax ku jira oo la yidhaahdo (the learning curve/process), oo la xidhiidha wax-soo-saarka iyo yaraynta kharashaadka ku baxa.
Ciidankii SNM, qaybihii 1aad iyo 8aad, dib-isu-abaabul ayay galeen. AHUN Col. Xuseen Qarash-yare, wuxuu ku dhintay jid-gooyo, niman dhallin-yaro ah, oo ka tirsanaa qaybtii 8aad ee SNM, oo dhegta uun ka maqlay waa la dhul-jiifeeyaa, ay dhigteen inta u dhaxaysa Duruqsi iyo Harada Gubata-xil. Dhacdadaas iyo dhacdooyin kale oo badaniba, waxay ka mid yihiin, baalasha madow ee taariikhdaasi leedahay.
SOO IF-BAXII KHILAAF WEJI KALE LEH.
Muddo yar oo kooban ka dib, taliskii aaggu wuu bur-buray magac ahaan iyo muuqaal ahaanba. Haddii aan soo koobo, afar sababood ayaa aano u ahaa in uu burburo taliskii aagga Bari ee SNM. Ta kowaad, dib-u-habayntiisii maamulka oo dheelli ku dhisantay. Ta labaad, ka hor dagaalka Caynaba 2 taakulayn saad iyo saanadba lahayd, oo loo diray qaybihii 7aad iyo 9aad, oo degganaa Gar-adag iyo Yufle sida ay u kala horreeyaan, oo aanay waxba ka gaadhin qaybtii 7aad ee Gar-adag fadhiday. Tan saddexaad oo ahayd geeridii AHUN Col. Xuseen Qarash-yare, oo ahaa nin niyad-sami badan hayey, oo ku taami jiray wadajirka ciidankiisa, sifahaas waxay wadaageen AHUN Col. Aadan S/baan, oo isagu weli dhaawacii ku maqan. Iyo tan afraad, oo ahayd, is-maandhaaf ka dhashay sida loo maamulayo hubkii Caynaba laga soo furtay oo ka dhex-qarxay Col. Axmed Mire iyo AHUN Col. Muuse Xasan Dhunkaal (Muuse-bidaar).
Khilaafkaa iyo burburkaa soo dhex-galay maamulkii aagga bari, wuxuu sababay in ciidan badan oo ka tirsanaa qaybtii 8aad ay ku biireen qaybtii kowaad, halka rag badan oo ka tirsanaa qaybtii 1aadna ay ku biireen qaybtii 8aad. In kastoo ay taasi dhacday, haddana ciidanka qaybaha 1aad iyo 8aad ee SNM, marna ma noqon qolo/qabiil sooc ah, oo ku kala abtirsada deegaan. Isu-gurmashada iyo wada-hawl-gelidduna marna ma go’in, in kastoo aanu sidii hore ahayn. Laakiin, waxaan qirayaa in niyad-jab yimi, oo taakuladii ka imanaysay taliska kaydka dhexe ee SNM (Kaam-Barwaaqo) ay qaybsantay, oo qaybtii 1aadna dhigatay kayd rasaaseed iyo shidaal tuulada Candha-dhexe ee u dhaxaysa Sibidhlay iyo Habeedlay. Halka, qaybtii 8aad iyo 2aadna ay kayd rasaaseed iyo shidaal ka samaysteen meel kale, oo xuduudka ahayd, oo aan filayo in ay Xaaji Saalax ahayd.
Qayb kastaaba, hawl-gallo gaar-gaar ah ayay fulin jirtay. Markan culayska ugu badani wuxuu fuulay qaybtii 1aad, maxaa yeelay laamigii Bari ee taakulaynta ciidammadii cadowga oo aan kala go’ayni ka imanaysay ayay wejiga ku hayeen. Dhawr-jeer, oo qaybtii 1aad hawl-gallo weerar iyo jid-goyn ka fuliyeen inta u dhaxaysa Ceel-dhaab ilaa Gaatama, waxay furteen gaadiid iyo hub ciidan oo fara badan, una badan hubka qoryaha dhexe ee gaadiidka la saaro. Khilaafkii soo kala dhex-galay Col. Muuse-bidaar iyo Col. Axmed Mire, wuxuu wiiqay sumcaddii ay ku dhex-lahaayeen ciidanka, ta labaad saraakiishii maamulka la haysayna way banneeyeen garabkoodii, tan saddexaad, waxaa in badan oo ciidankii dagaalka ah u iftiimay gurracnaanta ka dhex-jirta saraakiisha maamulka ciidanka. Taasoo qof waliba u fasirtay siduu rabay.
Saraakiisha dagaalka ee SNM-tu doqommo ma ahayn! Markay arkeen in la soo nacayo, awooddoodii maamulka ciidankuna ay liicday, waxay si tafaariiq ah, u qabteen galbeed iyo taliskii dhexe iyo xaruntii SNM, waa Kaam-Barwaaqo ilaa Balli-Gubadle. Mada-weyn shir ka dhacay, waxaa naloo sheegay in AHUN Col. Muuse Bidaar iyo Col Axmed Mire afku ka sii xumaaday, oo khilaafku cirkaa isku shareeray. Muddo yar ka dib, Col. Axmed Mire, wuu soo noqday oo wuxuu u gudbay Bariga gobolka Sanaag. Hoggaankii ciidanka ee labadaa qaybood waxaa la wareegay saraakiil-xigeen. S/baan Ciise Xirsi (salla-calee), wuxuu noqday taliyaha qaybta 1aad. Halka, Ina Dhabar-yare –naanaysta ayaa gadday/qarisay magaciisa oo saddexan-, uu noqday taliyaha qaybtii 8aad. Labadaas nin oo geesiyaal ahiba iminka waxay iyagoo dad caadiya ah ku nool yihiin magaalada Burco.
in kastoo, xilligaa maamulku gacanta ugu jiray saraakiil-xigeenka laga raystay khilaafkii iyo wer-werkii ku xidhiidhsanaa saraakiishu, xidhiidho wacanina ay na dhex-mareen ciidankii fadhigiisu ahaa Kal-dhadhaab, oo kulaalaysa magaalada Sheekh, -qormooyinka dambe ayaan ku lafa-gurayaa xidhiidhadaase- haddana way koobnaayeen hawl-gallada dagaal ee la fuliyay, taas beddelkeedana waxaa xadhkaha goostay dhul-jiifka iyo budhcaddaynta ay samaynayeen ciidanku, weliba ha u badnaato dhinacii qaybtii 8aade. Dhul-jiifku waa dhaqan-xumo ciidanka kaga timi galbeed, oo magacyo ugu bixiyay shicibkii iyo gaadiidkii qaxoontiga siday ee Darrooro ilaa Kaam-Abokor ku socday ee ay dhacayeen (Waa Lay Dhacay iyo Waa Lay Dilay). Waddada cad ee Gaashaammo ka shishaysa, oo qiyaastii u jirta 90 km talisyadii ciidanka ayaa loo budh-caddayn iyo dhul-jiifayn tegayaa. Sabaaxii ma-qade, ee 8aad lahayd ayaa la isu sheegay min-bari ilaa galbeed. Taasina waa bog kale oo madow, oo ay lahayd taariikhdaasi.
Muddo ayaa talisyada labadan qaybood ee SNM (1aad iyo 8aad) ay gacanta ku hayeen saraakiil/xigeen tayo sare lihi. S/xigeenka geesinnimada, hal-adayga, iyo kartida isku darsaday, ee aanan xaggii hore ku xusin waxaa ka mid ahaa Yuusuf Garbiye (Xaliimo-dhega-la’), Malloosh, iyo Carab Ileeye, AHUN saddexdoodaba. Carab Ileeye, wuxuu nin kasta oo kale kaga duwanaa, fur-furnaanta, niyad-wanaaga, dad-wadka, iyo dhiirri-gelinta. Hal-hayskiisii caanka ahaa ee "Jiibab Baa Iman!”, oo uu bixiyay dagaalkii Diinle, ee Muj. Hurre ku shihiiday, ayaa rumowday.
La soco Qormada saddexaad, oo aan idiinku soo gudbin doono. (IN SHAA ALLAAHU), soo noqoshadii Kornaylada (Colonels); Dagaalkii Banka Gubad Xiriir, iyo arrimo kale.